Rungano rwangu rwekufa neku dzoswa
Titambireyi, kwakadii kwabviwa?
Pano pamasvika panotaurwa Chizezuru. Kana iwe uri muZezuru chaiye, ukati kuvanhu unotaura chi Shona, unenge uchireva kuti unotaura mitauro yese inoti: ChiZezuru - ChiKaranga - ChiKalanga (Lilima) - ChiManyika - ChiHwesa-ChiBarwe. ChiKorekore – Chi Buja - ChiNambuya – ne ChiNdau. Ndizvo zvakapihwa zita rimwechete rekuti Shona. Tinonzwana pashoma-shoma nevese ivava, nekuti mamwe mazwi anonofanana. Tigona zvakare kunzwana pashoma nevanotaura ChiKirundi cheku Burundi neChiKinyarwanda cheku Ruwanda.
Kare vabereki vaiwana nguva yekutandara zvavo nemhuri, vachi kurukura nhau, ngano, zvirahwe, tsumo nekupanga mazano kumhuri dzavo. Makore ano zvinhu zvakasiya maitiro iwayo, vana navazukururu vavekuenda kuchikoro kachiri kadikidiki. Manheru zvekuita ndezvaaudzwa kuchikoro, kana kuona tivii nekute-erera wairesi. Achipedza chikoro ari kuenda kubasa, mhuri yake achinoivambira ikoko. Vamwe nevabereki vacho haatorina. Nguva iya yaipangwa navakuru mazano ehupenyu, aye mazano asinga dziidziswe kuchikoro, kunyange ukafunda zvinengei hapachisina.
Nekudaro dzimwe mhuri hadzichatombo ziva pekutangira, kuti azive kuti musha unzi musha zvino fambiswa sei. Maitiro edu, zvinoera kwatiri muChiZezuru apa hazvirege kunyange munhu asinga zvizive, mudzimu haurege kukusvikira kuti nekuti zvevadzimu hauzvizive. Ngozi hayirege kukubata ichireva twayo, kuti nekuti hausiwe wakapara mhosva yacho, kana kuti nekuti hahuko kumusha kwacho. Kunyange munhu ukafuririka zvako zvakadii uchiteedza zvemamwe marudzi ekunze kwe chizvarwa chako, kunenge kuri zvinyebera kana kuti kuhwanda nemunwe, zvinopera chete izvozvo.
Pamwe rinotozove dhuva kana kuti dambudziko raunenge uchito siira mhuri iroro, rekusa gadzirisa zviga zvemusha uchiri mumuviri iwe mukuru. Pagoitazve imwe nyaya yekuti, paya panenge vakuru vachi kohwerera zviga zvemusha iwe hauzvi cherechedze kuti vanenge vachizvi fambisa sei, zviya zvakafanana kana seku rova guva kana kudira mombe. Rimwe zuva unozosara wava ndiwe mukuru usina kana chauno ziva, hamheno zvako..
Pano pamasvika ndepekutandara zvedu tichitaura zvezvoozvo nezve zviizvi, taka tandara zvedu. Nyaya dzangu hadzipere semunhu ndabvazera, zvakare nekufamba nyika zhinji kwandaita ikoku dzakawandisa nyaya dzacho. Munogona kupota zvenyu muchindi bvakachira ipo pano tichitandara. Inini ndiri MuHera, ndiro dzinza rangu, mungazoti ko ndewe Dzinza ripiko iyeyu muchembere.
Ndiri kukuru kura ndichi batanidzira neku zviyeuchidzawo inini, nhau dzandai udzwa navakuru vangu. Nguva yanda kakura taive tisina kana chinonzi wairesi kana tivii, saka taiwana nguva yekukuru kurirwa nhau zvaka sununguka, pasina chaipinda pakati penhau. Shuga taive tisina basa nayo kuzoti icho chingwa kana kutombo chiziva. Sipo taichera musango yeku sukisa nhumbi dzedu. Ndiko kusaka mupfungwa mangu, ndiri kufananidzira tiri mumba medu kumusha ikoko kareko nevazukuru vangu.
Tiri kudziya zvedu moto apa tapedza kudya kwemanheru. Vamwe tadya sadza ne nyevhe ine dovi. Uyu muzukuru wangu uyu wekusada nyevhe uyu, ndatozo mugochera kanyama kakaoma kenyama yemombe ye Chimanda, yakabva kwaamai vake yavaka pihwa nemukuwasha wavo wekwanhingi uku. Nhasi vazukuru ndati ndimbokuudzayi nyaya yekuenda kwakamboita mweya wangu kudenga, kusvika kuna Musikavanhu, nema dzosero avakandiita pandakasvika ikoko. Mweya unodzikiswa pano pasi naivo Musiki, ugovezve nenguva yaunozo siya muviri wodzokera. Uchiberekwa urimucheche zviya muviri ndiwo unenge urimucheche, mweya mutsaru. Miviri yedu iyi mitumbi inogara mweya. Kana mweya wayenda muviri iwoyu unenge wodeedzwa kunzi chitunha. Mweya pauno dzikiswa pasi pano ne Musiki ndiwo uno sanganisa baba na amai kuti iwo uwane dendemaro panyika. Izvi ndaka zvionera ndega vazukuru, kwete zvekuverenga muzvinyorwa zvaka nyorwa naana nhingi.
Rwendo rwepanda kaenda kudenga rwacho urwu, rwakatanga mumwe musi tiri pamwe chete nevese vandairidza navo. Taive tiri ku Jerimani, tiri munzira yekuenda kuchitoro kwataino tenga zvinoridzwa zvino sanganisira magitare, nezvimwe zvese zvatinoziva zviya. Tichifamba kudaro ndakanzwa kubatwa bendekete rangu reku ruboshwe, neruwoko rwemunhu akanga ari mweya asina muviri. Ndokuudzwa kunzi: "mira ipapo izvozvi, ukaita imwe nhanhu kuenda kumberi urikudonha wobva wafa. Ita nhanho nhatu uchidzokera kumashure ugare pasi" Ndakaita sepo, vandaive navo ndokunditarisa vachiti ko chii chandaiita isu tichida kuenda. Ndakataura nechemu mwoyo kumunhu wemweya uyu, sezvo akanga akamira kuseri kwangu kundichengeta, ndikati: Tarisai muone zviso zvevanhu ava kugumbuka kwavaita kuti ndagarirei pasi. Ndapota, ndigonesei kunosvika kwatiri kuenda kwacho, ndozono gara pasi ndave ikoko. Zvikanzi zvakanaka simuka ufambe unonosvika.
Izvozvo zvaingove zvangu ndega, vandaive navo vaisa ona vakuru ivavo vasina muviri vandaiona inini:
Ndasvika ikoko, ndakagara pasi ndikatangisa kudedera nechemukati kunze zvisinga onekwe. Icho chakanga chava chirango chezvandakanga ndaita zvekuda kufadza vana nhingi. Asi pakaita mumwechete akazviona kuti pane zvaiitika kwandiri, ndoopaaka mhanya kunotsvaga mvura yekundidira, paya ndokunzwa zvakanaka pashoma. Ndakagona kudzokera kumba, rechimangwan ndokuenda kwachiremba.
Zuva iroro pandakaenda kwa chiremba paakanga achindi vheneka, mufananidzo ayiita achiona pane kanenge ka tivii. Ndakafunga ndikati regai ndingotarisawo ndione zvangu. Ndakatarisa kudaro ndaka zvibvunza kuti: Ko! Ndinozivawo chii chandaka tarisirawo ipapa? Pakare pakare, ndakabva ndawona pobuda mufananidzo wevanhu vaviri vairwa. Chiremba uya achibva apa maka akapa tenderedza paive nevanhu ivavo. Ndakamubvunza ndikati waonei apa? Iye ndokunditi ainge awona kuti hapana kumira zvakanaka. Ndikati wavaona here vanhu varikurwa ava iye ndokuti kwete, ainge angoona chete kuti hapana kutwasuka. Ndokunditi kurumidza kuuya mu hofisi. Paya ndagara pamberi pake muhofisi make macho, ndokuona iye kuti akanga azara nekutya, zvakare meso ake achiratidza kuyangarika misodzi. Ndokundiudza kuti, ndainge ndasarirwa nemazuva matatu kufa. Akadevedza motokari yekundi yendesa kwa chiremba mukuru wake, kwa ayida kuti anoonawo kuti zvaainnge awona ndizvo here.
Ndichisvika kuya kwachiremba mukuru uya, paakanga wondi vheneka ndakatarisa zvakare payibuda mufaninidzo wemukati memuvi wangu sezviya, ndokuona vaya vambenge vachirwa vavakuchera guva rangu. Pakati pavo ndokubva pamhara vasekuru vaamai vangu homwe yatateguru Kasingadomwe. Vaya vakachekwa musoro namaKiwa mugore ra 1897. Ndokubva vavamisa kuvatadzisa kuchera guva riya. Uya chiremba ndaka mubvunzazve kuti ainge awona here vanhu vatatu ivavo. Kwaani kwacho, zvaive mumaziso mangu ndega iye achiwonawo zvake.
Zvikanzi naiye saka ndava kudeedza motokari uyende kuchipatara, nokuti wasarirwa nemazuva matatu kuti ufe. Ndikamuti: Iwe, handisi kuzoenda kuchipatara, kana ndichifa ndinofira pese-pese, zvakare ndaka tarisana nerwendo rwekuenda kubasa. Zvikanzi naiye; Wanga uchiita basa rei? Ndikati ndinoridza mbira, kuimba nekutamba. Iye ndokuseka zvake, akanditi zvapera ufunge, saka zvekugadzirira kuenda kunoridza hazvichaita, chigadzirira zvekufa.
Akafonera murume wangu uyo ayinge achazo famba neni, kuti amuudze pese paive nechipatara mudzi nziradzo, kwaaizo endesa mutumbi wangu pandaizenge ndausiya. Zvechokwadiwo zuva riya rechitatu parakasvika mweya waka siya muviri pashoma kwemamita anenge maviri. Mweya wainge wakabatana nemuviri neka tambo kanenge kashinda katete-tete kari kachena zvaka nyanyisa. Ipapo ndichitotarisa pasi kumuviri kuona mandanga ndigere. Ndainge ndisisanzwe kutsika kwandaiita pasi. Kana kuzvi tswinya ndakanga ndisisanzwe kurwadziwa. Zvazvinoita vazukuru ndezvekuti kana tavakuenda muviri wava kusiyiwa, unenge munhu usisa zvinzwe kana ukabatwa kana ukazvibata. Pasi apa ndaiita sendiri kufamba pamweya ndisisanzwe kutsika kwandayi paita.
Munhu ne munhu ndakanga ndomuona mweya wake, kuti uchasiya muviri kwapera nguva yakadiyi. Iyi mweya yainge ichagara kwenguva yakareba iri mumiviri, hakuzenge kusuwa ikoko. Iyi yainge yasarirwa va ne makore mashoma yainge yoita ichifara pashoma nepashoma. Ndipo pandaka ziva kuti mweya wega wega unenguva yawaka rongerwa kudzokera. Aah! Ipapo pakuenda waive mufaro wakapetwa kasingapere, zvakafanana nekufara kunoitika paunenge wodzokera kumusha kwawanga wasuwa. Ini ndini ndainge ndakafara kukunda mimwe mweya yese, nekuti ndakanga ndisisina mazuva akawanda ekuzobva ndodzokera kumusha.
Kwataifamba ikoko mudzinzira dzekwataino ridza ndakanga ndisinga reteke-reteke kana kungo pfakanyika zvisina basa. Chiremba vakanga vandiudza kuti ndaitofanira chete kutaura chandaida kuti vanhu vasare vachiziva. Avawo vandaifamba navo chavai fambirawo vakangoti zii ndaka chishaya. Vaifanira kunge vachiimba vachingo fara semazuva ose. Ndinofunga kwaive kutya, ndivo vanhu vaya vanozo bongomora kuridza mhere mweya uchango siya muviri zviya, zvinove zvinhu zvino tadzisa mweya kufamba zvakanaka.
Basa ndaitoita zvakadaro mweya hauna kufamba mberi kubva paya pa mamita aya. Chakandi shamisa ndechekuti ndainge ndogona kubatana nemweya yevanhu vose, kupinda muhana chaimo kunzwa kurova kwacho, zvese nezviri kufunga munhu ne munhu. Kwese kwandakaridza mu Europe ndaiti ndika svika pa dariro rekuridzira vanhu vakangonditi bamama, midzimu yavo yoturuka. Kwaive kuri kuramba kwemimwe mweya kuti ndisaende sekurambwa kwazvakaitwa natateguru paya.
Zviya zvandinoita zvekusvetuka pakutamba kana kuita kakuzunguzira ndichiimba pakanga pasisina vazukuru. Ndakanga ndaudzwa kuti ndisadaro, ndoo chete zvandaka terera kubva kunaana chiremba vaya. Kwakapera mwedzi miviri tiri pakufamba mumaguta akasiyana-siyana, tichiridza zvakadaro chete, mweya uri kunze kwemuviri. Pataka dzokera kumba ndakabva ndasviko nanga kuchipatara kuti ndino viyiwa.
Chikonzero chaive chechinhu chakanga chamera mudumbu. Chakanga zvino chasvika nguva yacho yekuputika. Chidziidziso chondo kurayayi nhasi ndeche kuti, nguva nenguva muviri unoda kupota uchino ongororwa naana chiremba vanoona zviri mukati mawo, kuti uwonekwe kuti zvese zvitsvene here. Kwete kuzoenda wato rwara chete. Zvimwe hazvizo rapika vazukuru.
Zvinoitika ndezvekuti kana paine chinhu chinenge chozouraya muviri, mweya unofana wabuda mumuviri macho. Chikonzero chehurwere uhu chainge chiri chinhu chainge chibhora chaive nemukati mainge makazara ne mvura yeruvara rwezerere. Mukati macho muine twana netuzukuru twainge twaka zvimbirwawo nekuda kuputika. Mvura yaive machiri ndiyo yaizo uraya muviri iyoyo. Ndingangoti raiva bhazuka rakanga rakateyewa mudumbu, kuti parinoputika mvura idzodzo ndidzo dzakanga dziri muchetura. Kwakapera mazuva maviri ndiri muchipataramo, ndisinga rapwe vachironga vanachiremba machiburitsiro here kana kuti chii hamheno. Vachiri paku rangana kudaro, mweya inini ndokusiya muviri uyu kuenda. Pandainge ndava mudenga umoooo....., ndakasangana ne mweya mina yakanga yasiyawo miviri yayo. Ndokubatana murwendo rwedu kudzokera tiri vashanu. Tainge takafara tichito kurukura tichitoseka. Mweya waive padyo neni mweya wakanga wasiyawo muviri wawo ku Taipei. Nyamba nzira yedu imwe chete yatinodzokera nayo tese zvedu pasi pano.
Kutaura tinenge tonzwana. Zvekusa nzwana mitauro ndezve pano pasi, nezvekuti uyu ndewekwa nhingi kana werudzi rwupi zvinosara pano pasi. Tinoenda nekumabva zuva, takananga napaya patingati zuva rinenge rava kuma reveni kiroko nguva dzeku Zimbabwe. Hapasi padyo kurekure, kuresa kunoenda mweya ikoko.
Ndiye paya, patakanga tasarirwa nemamita angaite makumi matatu kana mana,ndokubva taona Musikavanhu vedu. Nyamba vanenge vakamirira kutigamuchira patino dzokerako. Ruvara rwavo vachena kukunda zvakaita jira jena-jena, kana kuti zvakaita dzangaradzimu kana wakamboriona. Vakanga vakagara painge pachituru vakaisa maoko avo pamabvi avo. Vakasimudza ruoko rwavo rweruboshwe ndokundi nongedzera vakati kwandiri nezwi guru: "Iwe!!!! Dzokera kwakare kumuviri wako!!! Une zvawanga wava kusiya usati waita uri mumuviri”. Vakazosara vopedzisa kutaura ndapishinuka kare nekusuwa kukuru. Ndaka gumbuka kuti ndainge ndodzokera nzira refu iyoyo ndega.
Pandakanga ndadzika zvekudzika zviya, ndakanzwazve izwi ravo Musiki riri neche pamusoro pangu, padyo-padyo neni. Iiih! Ndaknzwa kufara kuti nyamba ndaisava ndega.
Vakanditi: "Mira ipapo, mweya wako haufanirwe kudzokera makare mumuviri usina kuchenurwa, svinurisa maziso emuviri wako. Pandaka svinura ndakaona mwana wangu nemurume wake vachipinda kuzonditara. Mwari vakanga vatoresa mukuwasha wangu iyeyo kaseti ne wokumeni yekuti nditeerere dzimbo dzema Pygmies. Vaya vanogara mumasango epakati pe Afurika. Vakangosviko ndipfekedza munzeve maiyefoni. Kuzobvira ipapo, handina kuzoziva kuti vainge vaenda sei vana vangu, nekuti ndakabva ndadzokera kwandaive ne Musiki. Ivo vaito funga kuti ndaive ndiri mupenyu, havana kuziva kuti ndakanga ndisiri panyika navo.
Dzimbo dziya padzayi imbwa nema Pygmies ndichidziterera, ndakawona varidzi vadzo ivavo vachi ndiimbira vachindi tenderera. Vapedza kuimba kuya ndokundi takura, sezvo ndaisave nemutumbi ndakazviona ndiri chinhu chavaita sekudyorera. Vakagoenda neni kudziva ndokuno ndijubvika kakawanda mumvura muya. Zvikanzi ne Musiki zvakanaka wachena chidzika.
Ndakadzika kwenguva yakareba ndokunzi zvakare navo Musiki; "Mira ipapo, nokuti kuti mweya wako uyu uzadzire kupinda mumuviri kunofanira kuridzwa rumbo rwembira rwunonzi Mutamba. Svinurisa muviri wako maziso awo(pavaitaura izvozvo ndokuratidzwa mukuwasha uya zvakare achiridza Mutamba) Pandaka svinurisa muviri wangu maziso awo, ndakaona mukuwasha uya ne mwana wangu vachipinda zvakare muchipatara muya, iyemukuwasha aka isa mbira pachipfuva pake. Ndakaramba ndakamutarisa ndokuona iye avakuridza rumbo Mutamba. Pakare-pakare mweya waka pinda mumuviri zvine kumhanya kunenge kwebara kusvika kuti chuu!!. Ndokubva ndamuka kugara. Ndokuvaudza kuti ndadzoka, zvikanzi kubva kupi, ndikati kudenga. Vakango tarisana, hamhenowo zvakafunga ndokubva ndango nyarara nokuziva kuti hazvitsanangurike kuti munhu azvibvume.
Zuva iroro ndiro rakawuya vanachiremba, kuzonditora kuenda kuno ndivhiya kubvisa chiya chinhu. Pavakachi bvisa dai vaive vanhu veChiZezuru vangadai vaka pururudza, nemafariro avakaita ipapo. Musika vanhu vakazo ndiudza yava imwe nguva pandichazo dzokera kwavari, vakanditi ndisaudze munhu. Izvozvo zvaka ndifadza chose kuziva pandicha dzokera nekuti ndino gadzirira kuve kwandinoda kuzosiya muviri wangua zvandisingade.
Iyemi nyaya yemaruva amunoti ndanda pamusoro pe bokisi musazo zviita vazukuru ndapota. Zvakanzi ndikuudzeyi izvozvo. Iwo maruva mishonga yamusinga zive zvaino shanda. Chipiyaniso musazochiisa pagu ipapo. Musazo ndiviga ndiri mubokisi, nekuti bokisi ndere kunditakurisa chete, kana masvika pachidza mondiburitsa. Muchaputira muviri wangu ne jira jena mondiputira murukukwe rwe nhokwe, mou dzikisa. Pamunenge muchiudzikisa muviri moimba rumbo runonzi ‘Bayawabaya’.Bokisi riya mori pwanya morifusirawo kana muchirida motora zvenyu.
Iye kana uri munhu aka chenjera fana wakadya magwenzi ekuti usazo tsipikwa.
Kuti ugogona kusazoitirwa kana kuitiswa zvausingade kana muviri wafa.
Izvi ndakuudzayi vazukuru kuitira kuti murege kuzondi nyanganyurira muviri wangu.
Chekupedzisira, rapanurai chirahwe changu; nhengu nhengu mucherera kure besuririno. Aah! imiwee, tatandara nyaya hadzipere, tozotandarazve patinenge tazvigoneswa.
Ndatenda, move nenguva yakanaka.